Ny sabotsy maraina teo no tsikaritra babangoana ireo toerana roa ireo. Araka ny tafa manokana nifanaovan’ny mpanao gazetinay tamin’ny zandary any an-toerana, fasana lavitry ny lalana sady any an-tampon-tendrombohitr’i Morarano ireto fasana roa vaky ireto. Raha ny fampitam-baovaon’ny mpitandro ny filaminana amin’iny faritra Talatavolonondry iny hatrany izay nanao ny fitsirihina,
heverina efa vanim-potoana ela no nahavaky azy ireo. Fasana efa hatrany amin’ny razambe amin’ny taranaka maro izy ireo ka izao nahaverezana razana marobe izao. Saropady amin’ny Malagasy ny razana izay nahazoana ny aina sy ny lova, indrindra ny tanindrazana raha ny toe-tsaina sy ny filôzôfia Malagasy. Voazimbazimba tanteraka ireo razana, noho izany. Matoa izy ireo fonosim-damba, apetraka anaty fasandrazana izay vita amin’ny vato, tsy tiany ho raraka an-tany. Noho ny fifikiran’ny tatsinanana amin’ny valin’asa, tsy very maina fa mahakizo fara ny manivativa razana toy izao. Heverin’ny maro fa tafiditra ao anatin’ny tambajotran’ny ratsy izao famotehana kolontsaina Malagasy izao. Misy ireo mihevitra fa ampiasain’ireo olon-dratsy mankahery ny odiny ny taolam-paty
izay very etsy sy eroa tahaka izao.